ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: အချစ်သည် ...တစ်ခါတစ်ရံ၌.....(အပိုင်း -၁)
(မင်းလွင်) ထွန်းသစ် ဒီနေ့ မျိုးကြီး သူ့အဖေ သောက်နေကျ စီးကရက် တစ်ဗူးမလာတယ်တဲ့ကွ။ ငါတို့ မုန့်စားဆင်းချိန် စမ်းမလို့ ။ မင်းရော
(ထွန်းသစ်) ဟ ငြင်းစရာလား ဒါမျိုးဆို ငထွန်း တို့က ရှေ့ဆုံးက
(မျိုးကြီး) တော်စမ်းပါ ထွန်းသစ်ရာ နုငယ် ဟေ့ဆို နာမည်ကြားရုံနဲ့ ဒူးတုန်နေတာများ။ ဟိုတစ်ခါ ကျောင်းပြေးတုန်းကလဲ မင်းကို ခေါ်မိလို့ ငါတို့တစ်ဖွဲ့လုံး ဆော်ခံရပြီးပြီနော်. ခုလဲ ပိုင်မှ လုပ်..
(ထွန်းသစ်) အောင်မာ ငါက ဘာလို့ နုငယ် ကို ကြောက်နေရမှာတုန်း .. သူက အိမ်က မိဘတွေကို သွားသွားတိုင်လို့ သတိထားနေရတာ..
(မင်းလွင်) ထွန်းသစ် မင်းနဲ့ နုငယ်က ဘယ်ထဲက စပြီးခင်ကြတာတုန်း။
(ထွန်းသစ်) ငါးတန်းထဲက နုငယ် ဒီကျောင်းကို စပြောင်းလာစထဲက ဆိုပါတော့။ အိမ်ချင်းကလဲ နီးနေတော့ ငါတို့ ပိုတွဲဖြစ်သွားတယ် ထင်တာပဲ။ ခု ၁၀ တန်းရောက်တဲ့ ထိဆိုပါတော့။ မင်းက ဒါတွေ ဘာလို့လာမေးနေတာလဲ။ မင်းလွင်နော် ဟင်း မင်းအကြောငါက မသိရင်ခက်မယ်။ နုငယ်နဲ့ ဝေးဝေးနေကွာ။ ငါကသူ့ရဲ့ အစ်ကိုလိုဆိုရင်လဲ မမှားဘူး။ ငါ ဒါပဲပြောမယ်။
(မင်းလွင်) ဟင်း............ အေးပါကွာ။ အေးပါ။
မုန့်စားဆင်းချိန်ရောက်တော့ သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေ မျက်စပစ်ပြီး ယောက်ကျားလေး အိမ်သာဘက်လျှောက်လာခဲ့ကြသည်။
ရုတ်တရက် ထွန်းသစ် စလွယ်သိုင်းလွယ်ထားသော လွယ်အိတ်ကြိုးအား ဆောင့်ဆွဲခံလိုက်ရသည်။ ဒေါသထွက်ထွက်နှင့် လှည့်ကြည့် လိုက်တော့..
(ထွန်းသစ်) အာ..နုငယ် ဘာလုပ်တာတုန်း.ငါက တစ်ခြားသူမှတ်လို့ တင်းပြီး ..ကိုင်တော့မလို့
(နုငယ်) ဟွန်း နင်တို့ယောက်ကျားလေးတွေကလဲ အားနေ ရန်ဖြစ်ဖို့ရယ် မဟုတ်တာလုပ်ဖို့ရယ် ဒါပဲ။ ဟိုမှာလေ မတွေ့ဘူးလား လူအုပ်ကြီး မုန့်လုဝယ်နေကြတာ။ ငါ့ကို တိုးပေးပါလား.ပြီးတော့ ဆိုင်အောက်မှာလဲ ရေတွေအများကြီး ၀င်နေတော့လေ ထမိန်တွေ ရေစိုကုန်မှာစိုးလို့။ လူရှင်းမှ ဆိုလဲ ငါစားချင်တဲ့မုန့်မရမှာစိုးလို့ပါဟ...နော်..နော်..
(ထွန်းသစ်) ငါ မအားဘူး။ ဟိုမှာ သူငယ်ချင်းတွေစောင့်နေတယ်။ လူရှင်းမှ ကျန်တာဝယ်စား။
ထိုစဉ် မင်းလွင် အနားသို့ရောက်လာပြီး
(မင်းလွင်) ထွန်းသစ် ဘာဖြစ်နေတာလဲ ။ သွားမယ်လေ တော်ကြာ ကျောင်းပြန်တက်သွား အုန်းမယ်။ ဟိုကောင်တွေ စောင့်နေတယ်။
(ထွန်းသစ်) ဒီမှာလေကွာ နုငယ် လာရစ်နေတယ်။ မုန့်ဈေးတန်းကနေ မုန့်တိုးဝယ်ခိုင်းနေတာ။ ဒီနေ့မှ မိုးရွာတော့ အပြင်မထွက်ကြပဲ အထဲကဆိုင်မှာ လူလာအုံနေတာကွ။ ဆိုင်အောက်မှလဲ ရေတွေဝင်နေတော့ သူ့ထမိန်တွေ စိုမှာစိုးလို့တဲ့။
(မင်းလွင်) ဒါ..ဒါဆို မင်းသွားချင်သွားလေ ငါ..ငါ ၀ယ်ပေးလိုက်မယ်။
ဒီလိုဆိုတော့ ထွန်းသစ် က မကြိုက်ချင်
(ထွန်းသစ်) နေနေ ..ငါပဲ တိုးပြီးဝယ်ပေးလိုက်တော့မယ်။ မင်းတို့သွားနှင့်တော့။ကျောင်းပြန်မတက်ခင် ငါလိုက်လာခဲ့မယ်။ စောင့်တော့မနေကြနဲ့..ရော့ နုငယ် အရှုပ်မ ငါ့လွယ်အိတ် ယူထား ပေး နင့် ပိုက်ဆံ.. ဟေ့ကောင် မင်းလွင် သွားတော့လေ ငါ့ကို စောင့်မနေနဲ့
မင်းလွင် ကတော့ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်နှင့် ထွက်သွား၏။ ပြောပြောဆိုဆို ထွန်းသစ် ပုဆိုးကို တိုတိုပြင်ဝတ် နုငယ်ထံမှ ပိုက်ဆံယူုပြီး လူအုပ်ထဲတိုးသွားလေပြီ။
နုငယ် တစ်ချက် ပြုံးလိုက်သည်။ ဟင်း ဒင်း ဒီလူအုပ်ထဲတိုးနေလို့ကတော့ မုန့်စားဆင်းချိန်ကုန်လုနီးနီးတိုးရမည်။သူမ သိပြီးသား ဟိုကောင်တွေမျိုးကြီးတို့အုပ်စု နှင့် ဆေးလိပ်လိုက်သောက်မှာ စိုးသောကြောင့် တစ်ဖက်လှည့်နှင့် သူမခိုင်းလိုက်ချင်း ဖြစ်သည်။ ဒင်းက တားလဲရမည်မဟုတ်။ သူမက မိဘတွေကို သွားတိုင်လဲ စိတ်ဆိုးမှာစိုးသည်။ ဟိုတစ်ခါ ဒင်း ကျောင်းပြေးတုန်းက သူမတိုင်လိုက်မိသောကြောင့် သူ့အဖေရိုက်တာများ ဒင်း အိပ်ယာထဲက ၃ ရက်မထနိုင်။ ဒီလိုဆိုတော့လဲ သူမမှာ စိတ်မချမ်းသာပါလေ။ ဟင်း ခုတော့ ဒင်းဘာတတ်နိုင်သေးတုန်း....
(နုငယ်) အန်တီကြူရေ ထွန်းသစ်ရှိလား။ ဒီမှာ စာအုပ်တွေလာပေးတာ။
(ဒေါ်ကြူ) အေးအေး ရှိတယ် သမီးရေ။ ရှိတယ်။ ဟိုကောင် ထွန်းသစ် ဒီမှာ သမီးနုငယ်ရောက်နေတယ်။ လာလာ သမီး အိမ်ထဲဝင်။
(ထွန်းသစ်) လာပြီ လာပြီ အရှုပ်မ။
အော်လဲ အော် အိမ်ထဲကလဲ ပြေးထွက်လာ၏။
(နုငယ်) အောင်မာ ဘာအရှုပ်မလဲ။ နင် ဟိုနေ့က ကျောင်းတစ်ချိန်လစ်ထားတဲ့ စာတွေလာပေးတာ။မနက်ဖြန် ဆရာမ စာမေးမယ်လေ။ နင်ပဲ လာရှင်းပေးပါဆို သေမလို မျက်နှာထားနဲ့ ငါ့ကို ကျောင်းဆင်းတုန်းက မှာထားပြီးတော့။ ခုဘာအရှုပ်မလဲ။ ဟွန်း မုန့်စားဆင်းချိန် မုန့်တိုးပေးထားတဲ့ မျက်နှာနဲ့လဲ ငါက လာပေးရသေးတယ်။
(ထွန်းသစ်) အော် ဟုတ်သားပဲ သယ်ရင်းလေးကလဲ ငါက မေ့တတ်လို့ပါဟ။ ဟီး စိတ်မဆိုးနဲ့ လာလာ.ငါတို့စာကြည့် ခန်းထဲသွားမယ်။
ဒီလို နီးနီးကပ်ကပ် ခုံတစ်ခုံမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင် သူမစာရှင်းပြနေတော့..ရေချိုးပြီးကာစ သနပ်ခါးနံ့ သင်းသင်းတို့က နှာခေါင်းထဲမှာ မွှေးပျံ့နေသည်။ ဒီနေ့မှ သူမ ၀တ်လာသော ဂါဝန်အင်္ကျီ လက်ပြတ်နက်ပြာရောင်လေးနှင့် သူမ အသားအရေဖြူဝင်းပုံနှင့်က ကြည့်လို့ ပိုကောင်းနေ၏။ ပြီးတော့ သူမ၏ ကလေးဆန်ဆန် ဟန်ဆောင်ခြင်းမရှိ စကားပြောဟန်လေးကိုးက ထွန်းသစ် ရင်ထဲ ကလိကလိ။ အသည်းယားနေ၏။ သူမ၏ သနပ်ခါးရေကျဲလိမ်းထားသော ပါးဖောင်းဖောင်းလေးများအား စိတ်ရှိလက်ရှိ ငယ်ငယ်တုန်းကလို ဆွဲလိုက်ရရင်ဖြင့်တော့လေ ..ဟင်း..ဟင်း
(နုငယ်) ဟဲ့ ငထွန်း ငါရှင်းပြတာနားလည်လားလို့ မေးနေတယ်လေ။ စိတ်က ဘယ်ရောက်. ဟင်း ကျောင်းကပြန်ရောက်တာ ကြာနေပြီ ခုထိ ရေမချိုးရသေးဘူး။ ငပျင်း။ ချွေးစော်ကလဲနံသေး။ ဒါကို ငါက သည်းခံပြီး ရှင်းပြနေတာတောင် နင့်စိတ်က ဘယ်ရောက်နေလဲ..ငါလေ ခေါက်လိုက်ရ..
(ထွန်းသစ်) နင်ကလဲ နားလည်ပါတယ်ဆိုဟာ. သိပ်ဆရာကြီးလုပ်တာပဲ။ သြော် ဒါနဲ့ စကားမစပ် နုငယ်..နင်ကြီးလာရင် ငါ့ကို ယောက်ကျားလုပ်ပါလား..
(နုငယ်) ဘာ..ဘာပြောတယ် ..
နုငယ် လက်ကလဲမြန်ပါ၏ ဘာပြောတယ်က နောက်မှ လက်ကအရင် ဘေးမှာရှိသော သံကွန်ပါဗူးနဲ့ သမလိုက်၏။ လက်သံပြောင်သလားမမေးနှင့်...ထွန်းသစ် နဖူးမှ သွေးတို့လဲရဲကနဲ ...ထွန်းသစ်လဲ အား...ကနဲ
(နုငယ်) အန်တီ..အန်တီကြူရေ လာပါအုန်း ဒီမှာ ထွန်းသစ်ခေါင်းမှာ သွေးတွေ...
(ဒေါ်ကြူ) ဟဲ့ ဟဲ့ အမယ်လေး သား ခေါင်းမှာ သွေးတွေပါလား ဘာဖြစ်ကြတာတုန်း. ခုနက စာရှင်းနေကြတာအကောင်း
(နုငယ်) ဟို..ဟို..ဟို လေ..
(ထွန်းသစ်) အာ ဒီအရှုပ်မ တစ်ဟိုဟိုနဲ့ ခေါင်းကနာနေပြီ...သား ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်နောက်ပြီး နုငယ်ကိုစလိုက်တာ..အဲဒါ လက်ကနဲနဲ ပြင်းသွားတယ်..ကွန်ပါဗူးက ကော်မှတ်လို့ ဟီး သံဖြစ်နေတယ်..ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး သားထင်တာနဲနဲ ပွန်းသွားတာ နေမှာ..
ဒေါ်ကြူ သိလိုက်သည် ဒီကလေးတွေ စကြဆော့ကြရင်း လက်လွန်ပြီလို့
(ဒေါ်ကြူ) ကဲကဲ ပြအုန်း အမေ့ကို တော်တော်ကြီးသွားလား...
အနာသည် သိပ်တော့မကြီးပါ။နဲနဲ ကွဲသွားရုံသာ။ သို့ပေမယ့် ထိုနေ့သည် ထွန်းသစ်၏ ရင်ခုန်သံတို့စသောနေ့ ထို့အတူ နုငယ် သည်လည်း သူမ၏ အပြစ်အားကာပြောပေးသော ထွန်းသစ်အား စိတ်ထဲတွင်သနားသလိုလို... တစ်မျိုးကြီး အမျိုးအမည် မသိသော ဝေဒနာအချို့တော့ သူမရင်ထဲ ကိန်းသွားသည်တော့ သေချာသည်။ဘာလဲတော့ သူမ အသေအချာ မသိသေး....
ရေးမယ် ရေးမယ်နှင့် စဉ်းစားရင်း အားတဲ့ အချိန်လေးရသလောက်ရေးတင်လိုက်မိတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကိုလဲ တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်လေးစဉ်းစားပြီး ရေးတင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်။ ဘလော့လေးကို ဒီအတိုင်းပစ်ထားရတာ သနားလို့။
ဘလော့ မောင်နှမများအားလုံး ကျန်းမာလို့ ရွှင်လန်းကြပါစေနော်။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy!4July 2011 at 12:48
mstint4July 2011 at 17:52
မပြီးသေးသော ဇာတ်လမ်းလေး ဖတ်သွားပါတယ်ကွယ်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)4July 2011 at 19:22
ဖတ်နေရင်းနဲ့ ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ရောက်တော့ ဝတ္ထုက ဘယ်လိုကြီးလဲလို့ထင်လိုက်မိတယ် နောက်တော့မှာ ဘလော့ပိုင်ရှင်ရဲ့ အာဘော်ကိုး..
ဖတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ ဖတ်နေတာ ဆက်ရန်နဲ့ တိုးသွားတာကိုးး)
မြစ်ကျိုးအင်း7July 2011 at 06:26
ခုမှရောက်ဖြစ်လို့ ပထမအပိုင်း အရင်ဖတ်လိုက်တယ်။
mabaydar 20 February 2012 at 20:57
အစကနေ စဖတ်နေပါတယ်... အပိုင်း ၁ ပြီးသွားပါပြီ... ဆက်ဖတ်ဖို့ ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်...
အချစ်သည် ...တစ်ခါတစ်ရံ၌.....(အပိုင်း - ၇)
အချစ်သည် ...တစ်ခါတစ်ရံ၌.....(အပိုင်း -၆)
အချစ်သည် ...တစ်ခါတစ်ရံ၌.....(အပိုင်း -၅)
အချစ်သည် ...တစ်ခါတစ်ရံ၌.....(အပိုင်း -၄)
၂၀၀၀ ခုနှစ် တက္ကသိုလ် ဖီလင်..
အချစ်သည် ...တစ်ခါတစ်ရံ၌.....(အပိုင်း -၃)